Shiinaha: 10 xaqiiqo oo kaa caawineya barashada quwadda maanta ee dunida – Radio Daljir
Shiinaha: 10 xaqiiqo oo kaa caawineya barashada quwadda maanta ee dunida
Juunyo 24, 2019 2:23 g 0
Tirada dadka Shiinuhu maanta waa 20% marka la tiriyo dadka dunida ku nool oo dhan. Dhanka koritaanka dhaqaalaha, afartankii sano ee la soo dhaafay dhaqaalaha Shiinuhu waxa uu ku korayey 10% sannad walba, taasna waxa ay suurtagalisay in Shiinuhu noqdo dal heer ka gaaray taknoolajiyadda iyo warshadeynta.
Dhanka tartanka quwadaha adduunka, siiba dhaqaalaha, weli Mareykanka ayaa ah quwadda koowaad, laakiin Shiinuhu waa labeeyaa.
Intaas kaliya ma aha e magaalooyinka waaweyn ee adduunka ee tiiba 10 milyan iyo ka badan ay ku noolyihiin, lix kamid ahi waxa ay ku yaalliin Shiinaha.
Dhanka xifaaltanka dhaqaale ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, Mareykanka oo xifaaltankiisa wada, kobaca dhaqaale ee Shiinuhu waxa uu qaybtii koowaad ee sannadkan kor ku dhaafay 6.4%, laba jibbaar ka badan saadaalintii Qaramada Midoobey.
Dhaqaalaha oo koraa waxa uu sababaa nolosha oo qiima yeelata, caafimaadka oo ka soo raaya, sidaas darteed, cimriga dadka Shiinuhu asna waa uu siyaaday, oo cimriga ragga Shiinaha hadda waxaa lagu qiyaasaa 75 sano meesha haweenku ayana ay gaaraan 78.
Haddaba aan idin la qaybsano 10 xaqiiqo oo idin ku kaalmeeya in aad fahamtaan meesha Shiinuhu maanta uu adduunka ka marayo:
1) Waxa ay dayax-gacmeed iskiis isku wada ku dajisay dusha fog ee Dayaxa
Dayax-gacmeedka is wada ee Chang’e-4 waxaa bishii Janaayo 2019 laga dul dajiyey dhagaxa weyn ee dhanka boolka koonfureed ku beegan, waxa uuna waday tijaabooyin cilmi saynis oo ka kala yimid dowlaaha Netherlands, Jarmalka, Sweden iyo Sucuudiga. Waxaana hadda la qorsheynayaa duulista dayax-gacmeed dad wado oo ka dega Mars iyo Jupiter. Waxaa kaloo la qorsheynayaa in Space Station asna samada la dajiyo waqti aan fogeyn.
2) Shiinuhu waxa uu hagayaa cilmiga adduunka ku cusub ee “caqli abuurka (artificial intelligence).”
Cilmigaas waxa ay kambaniyada Shiinuhu yeesheen 473 caqli-abuur oo qayb ka ah 608 caqli-abuur ee maanta adduunka laga abuuray illaa iyo hadda
Dowladda Shiinuhu waxa ay hadda maalgalineysaa ku dhawaad $2 bilyan oo goob caqli-abuur laga dhisayo Beijing, ayna ugu horreeyaan caqli abuurka iyo taagerada cilmiga asna cusub ee loo yaqaan “blockchain.”
3) Shiinuhu waxa uu saldhig u yahay saddex-meelood-meel kambaniyaasha adduunka ugu waaweyn ee dakhligoodu ka badanyahay $1 bilyan USD
Waxa ay soo saareen 97 kambani (UNICORN start-ups) oo cusub ama celcelis ahaan afartii maalmoodba (3.8 maalmood) hal kambani oo dakhligiisu kor u dhaafayo $1 bilyan USD.
Shiinuhu waxa uu dhisayaa xarun taknoolajiyadda cusub oo ka kooban 11 magaalo oo loogu talagalay in ay la tartanto xarunta Mareykanka ee Silicon Valley.
4) Shiinuhu waxa uu maanta hormuud u yahay dunida dhanka isticmaalka tamarta la cusbooneysiiyo, sida qorraxda iyo dabeysha
Sidoo kale Shiinuhu asagaa adduunka ugu horreeya dhanka afuufka hawada xun ee ka timaada dhuxusha iyo saliidda
5) Saddex-meelood-meel cagaarka adduunka waxaa maanta lagu beeraa Shiinaha
Shiinuhu waxa uu gaaray heer uu buuraha dhulkiisa saxara ah ku yaal oo gaaraya 67,000 hektar ka dhigo hawd, waana la wada dhireeyey. Sidoo kale baa dhanka xeebahana loo cagaariyey.
6) Dhaqaalaha Shiinuhu wuu yara dabcay, laakiin weli cirkuu heehaabayaa
Illaa iyo 1970-kii koboca dhaqaale ee Shiinuhu waxa uu celcelis ahaan ahaa 10%, dad kor u dhaafaya 850 milyan oo Shiine ahna waxaa laga suuliyey faqri iyo nolol xumo. Hadda saadaasha koboca dhaqaale waa 6.3%, meesha kobaca adduunka lagu qiyaasayo in uu noqonayo 3.3%
7) Gawaarida adduunka ee ku socota tamarta korontada Shiinuhu waxa uu leeyahay 50%
Dadka Shiinuhu waxa ay sannadkii la soo dhaafay ee 2018 gateen 1.1 milyan gaari oo cusub oo tamarta korontada ku shaqeeya. Waxa uu Shiinuhu sanceeyaa oo soo saaraa in ka badan 50% batariyada adduunka ee gawaarida korontada ku shaqeeyaan ay isticmaalaan. Waxaa Shiinaha ka hawlgala 99% basaska adduunka ee ayana korontada ku shaqeeya.
8) Dalxiisayaasha Shiinuhu waa qayb weyn oo kamid ah kobaca dhaqaale ee adduunka
Sida uu dhaqaalaha Shiinuhu u korayo baa dalxiisayaasha Shiinuhu ayana u badanayaan, sannad kastana kobcaya 6%. Sannadkii 2017, dalxiisayaasha Shiinuhu waxa ay baxsheen lacag kor u dhaafaysa $1 tirilyan USD ama $1,000 bilyan USD.
9) Sinnaanta jinsiga Shiinuhu hormar weyn buu ka sameeyey
In kasta oo Shiinuhu weli hooseeyo dhanka sinnaanta ragga iyo dumarka, uuna tirada 149 dal ka marayo meel hoose iyo 103, haddana kor buu u socdaa oo dowlado badan mar dhow wuu dhaafi doonaa, dhanka siyaasadda, dhan maamul iyo waliba dhanka farsamada.
10) Shiinuhu waxa uu hoggaaminayaa xulufada ay isku bahaysiga yihiin ee BRIC (Brazil, Russia, India iyo China)
Shiinuhu waxaa hadda lagu qiyaasay in uu yahay dalka 28aad ee adduunka ugu tartan badan iyo waliba dhanka cilmibaarista iyo hormarinta. Dhanka waxsoosaarka iyo waxyaalaha cusub, Shiinuhu asagaa hadda adduunka hoggaaminaya, waxaana safka hore kula jira Jarmalka, USA iyo Switzerland.
Haddaba ha u deymo la’aan kor-u-kaca dalka Shiinaha, dhan waxsoosaar, dhan dhaqaale, dhan milateri, iyo dhan caqli-abuurka cusub ee dunida.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 470 Wararka 18997